Traduzioni di lecciones da SpagnoloaBirmano - MyMemory
Hai cercato la traduzione di lecciones da SpagnoloaBirmano
Rimsha ha sido acusada de quemar algunas páginas del Noorani Qaida , lecciones para aprender árabe para principiantes, y meterlas en una bolsa de plástico.
ရ့င်(မ်)ရှာသည် (အစ္စလာမ်ဘာသာကို) စတင်လေ့လာသူများအတွက် အာရေဗျ သင်ခန်းစာများဖြစ်သည့် နူးရာနီ ကိုင်ဒါစာအုပ်မှာ စာမျက်နှာအချို့ကို မီးရှို့ပြီး ပလပ်စတစ်အိတ်ထဲသို့ ထည့်သည်ဟု စွပ်စွဲခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။
A pesar que las iraníes siempre se han resistido y han desobedecido tanto esta ley como este tratamiento inhumano, cada verano presenciamos nuevas olas represivas muy duras contra ellas, ya que aquellos que quieren hacer que las mujeres cumplan con esta ley parece que no han aprendido aún la lección.
အမျိုးသမီးများအား ရှက်ကြောက်မှုကို ခံစားရစေပြီး အရာဝတ္ထုများသဖွယ် ဆက်ဆံခဲ့သည်။ အီရန်အမျိုးသမီးများက ထိုလူသားမဆန်သော ဥပဒေနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများကို အစဉ်ဆန့်ကျင်ပြီး မလိုက်နာခဲ့သော်လည်း ဖိအားပေးလိုက်နာခိုင်းသူများကမူ မည်သည့်အခါကမျှ သင်ခန်းစာကို မသင်ယူခဲ့ပေ။
သူတို့သည် တလုံးတဝတည်း တိရစ္ဆာန်သဘော နှင့် မိုက်သော သဘောရှိကြ၏။ သစ်သားသော်လည်း မိုက်သောအယူကို ဆုံးမတတ်၏။
Los extraviados de espíritu conocerán el entendimiento, y los murmuradores aprenderán la lección
စိတ်သဘောဖောက်ပြန်သောသူတို့သည် ပညာ သတိကို ရကြ၍၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသော သူ တို့သည်လည်း၊ ဆုံးမဩဝါဒစကားကို နာယူကြလိမ့်မည်။
mays (Tedesco>Italiano)vyandskap (Afrikaans>Portoghese)okokoko (Xhosa>Inglese)you didn't sleep yet (Inglese>Telugu)aap meri baat nahi sunte ho (Hindi (indiano)>Inglese)sense of the word arrogant (Inglese>Swahili)lobi (Tagalog>Inglese)bidang kulinari (Malese>Cinese semplificato)over indebted (Greco>Inglese)aisa thodi na hota hai (Hindi (indiano)>Inglese)do u like kiss with me (Inglese>Portoghese)sunar ka ling badlo (Inglese>Hindi (indiano))opstel my toekoms (Afrikaans>Inglese)tantum (Inglese>Arabo)no one will love you more than your father (Inglese>Hindi (indiano))me delhi jata hu (Hindi (indiano)>Inglese)reisegenehmigung (Tedesco>Italiano)잘자구 (Coreano>Inglese)sisu kolai (Inglese>Tamil)docerent (Latino>Inglese)goku (Spagnolo>Inglese)přípustnosti (Ceco>Slovacco)maitohappobakteereista (Finlandese>Tedesco)pain changes people (Hindi (indiano)>Inglese)konsi ladki (Hindi (indiano)>Inglese)